मेरो वरिपरिको कथाNepaliPatra News
Links Exchange	मेरो वरिपरिको कथाबुल्सन[ ]मोबाइलको घन्टी बज्यो ।"हेलो...""थ्याङ्क्यु ।"अनि तिमीलाई पनि धेरै-धेरै शुभकामना ।"हृयाप्पी न्यू इयर"राजले फोन राखेपछि मेसेजहरु देख्यो फोनमा । मेसेज हेर्दै टिभी अन गर्‍यो । रिमोट घुमाउँदै सिएन्एन्मा गएर अडियो । टाइटेनिक डुबेको एक सय वर्ष भएको खबर आइरहेको थियो । १९१२ को अपि्रल १४ को दिन टाइटेनिक विशाल बरफसँग ठोक्किन पुगेको थियो र क्षणभरमा नै डुबेको थियो । १५०० भन्दा बढी यात्रुहरुले त्यस घटनामा ज्यान गुमाएका थिए अनि सात सय केही त्यो विशाल जहाज नडुब्दै बाहिर उत्रिसकेका थिए । बीचबाट आधा-आधा भएको टाइटेनिकका दुई टुक्रा समुन्द्रको पिँधमा दुई हजार फिट टाढा छन् । राजले आˆनो मोबाइलमा हेर्‍यो, आज त अपि्रलको १३ रै'छ ।राजले टिभीमुनि डिभीडीले भरिएको ब्याग खोल्यो, अनि सर्सर्ती पाना पल्टाउँदै हेर्‍यो । केही ननिकाली फिर्ता राख्यो ।राज एउटा ट्रेकिङ एजेन्सीमा काम गर्छ । काममा पुग्ने बित्तिकै इमेल चेक गर्‍यो । उसले एक जना अस्ट्रेलियनको इमेल कुरेको थियो । ट्रेकिङमा जाँदा यो अस्ट्रेलियनसँग उसको राम्रो दोस्ती भएको थियो । अनि एउटा इमेलले उसको ध्यान खिँच्छ ।प|mम् ः नोबुकोसब्जेक्ट् ः हैप्पी न्यु ईयरएक वर्षभन्दा बढीमा पहिलो इमेल थियो यो, नोबुकोले पठाएको । पाँच वर्षअघि, ट्रेकिङ गाइड भएर काम गर्दा अन्नपूर्ण जाँदाको कुरा हो । नोबुको र उसका जापानी साथीहरुको समूहलाई राजले पुनहिल घुमाउँदै थियो । त्यो टोलीमा सबैभन्दा राम्री नोबुको नै थिई । सुन्दर अनि मुस्कुराइरहने अनुहार । पुनहिलबाट फकिर्ने बेला नोबुको बिरामी भई । सबै साथीहरु अघिअघि हिँडेका थिए । उसले केही भनिन, साथीहरुलाई रोक्नु पर्ला भनेर । गति साह्रै कम भएपछि राजले कुरा बुझ्यो । सबै साथीहरुसँग छलफल गरेर, निकै बेरको थकानपछि सबै जना घोरेपानी पुगे । मार्फा हुँदै जोमसोमसम्मको यात्रामा थियो यो टोली । नोबुको जान नसक्ने भई । बिरामी अवस्थामा एक्ली नोबुकोलाई छोडेर जान साथीहरु नमानेपछि सबै पोखरा फर्किए, अनि पोखरा वरपर मज्जाले घुमघाम गरे । "हैप्पी बर्थ डे, नोबुको !" राजले बिहानै शुभकामना दियो । उसले ट्रेकिङ परमिट लिने बेला नोबुकोको पासपोर्टबाट उसको जन्मदिन थाहा पाएको थियो । उसले दिएको स्कार्फ लगाएर नोबुकोले निकैबेर ऐना हेरी । गाढा हरियो रङको त्यो उपहार उसलाई खुब मन पर्‍यो । एउटी साथीले त गिज्याई, "नेपालतिरै बसौली है !"नोबुको टुहुरी थिई । बाबु-आमा सानैमा बितेपछि उसलाई काका-काकीले पालेका थिए । नोबुकोलाई पनि राज मन पर्दै गयो । उनीहरु धेरै समय सँगै बिताउन थाले । उनीहरु साथी भए । राजले आˆनो कथाहरु भन्यो । उसको बाबु ऊ नजन्मिदै बितेका थिए । घरमा आमा मात्रै रहेको कुराले झन् आकषिर्त भई नोबुको । उसलाई 'हामीहरुलाई भगवानले एक अर्कोको लागि बनाएका हुन्' भन्ने लाग्यो । अर्को बिहान नोबुकोको आँखा छोपेको कपाल हटाउँदै राजले सुम्सुमायो । नोबुको ब्युँझी । दुवैले केही अप्ठेरो महसुस गरे । माहोल सहज बनाउन राजले सोध्यो, "तिम्रो नामको अर्थ के हो नि ?""इमान्दार बच्चा, विश्वासिलो ।"नोबुकोको इमेल पढिरहँदा अर्को इमेल आयो, त्यही अस्ट्रेलियनले स्पोन्सर लेटर पठाएको । उसले फोन लगायो, "हेलो समिर, स्पोन्सर लेटर आयो ।...""ल, ल । आधि घण्टामा आइपुग्छु । अरु के के ल्याउनु पर्छ ?"अनि ऊ समिरलाई भेट्न गयो । समिर माइग्रेसन कन्सल्ट्यन्ट हो, उसको साथी पनि । समिरको बाट फर्किंदा उसले बाटोको छेउमा सिडी डिभीडी बेच्न राखिएको ठेला देख्यो ।"भाइ, टाइटेनिक फिलिम छ ?""पुरानो हो केरे फिलिम त, त्यही नि हेर्छु ।""कति ?""तीस दिनु न ।"लाइन गएन भने भरे नै हेर्ने सोच बनायो उसले । फिल्म हेरिरहँदा उसलाई नोबुकोको धेरै याद आयो ।नोबुको दोस्रो पटक नेपाल आउँदा उनीहरुको बिहे भएको थियो । राज जापान गएको दुई वर्ष भयो । मार्चको १० तारिक फुकुसिमाको एउटा रेस्टुरेन्टमा केही साथीहरुसँग उनीहरुले राजको जन्मदिन मनाए । भोलिपल्ट बिहान सबैतिर कोलाहल सुरु भयो । सबैजना भागाभाग भए । नोबुकोले राजलाई जगाई । पत्याउनै नसक्ने गरी मान्छेहरु मरे, आँखा अगाडि नै । घरहरु बगे, भत्किए । कति अनाथ भए । राजले नोबुकोलाई आउन सक्ने खतराको बारेमा बतायो ।"नोबु, हामी नेपाल जाऊँ, पछि सबै ठीक भएपछि फर्किउँला !"उसले जान मानिन, "यो अवस्थामा म कसरी जान सक्छु !""तर यहाँ खतरा छ ।""खतरा तिमी र मलाई मात्रै होइन, यहाँका सबैलाई छ ।""तर म मर्न चाहन्न नोबु, मतलब हामी !"राज बस्न नसक्ने, नोबुको देश छोडेर जान नसक्ने ।"अरु समय भएको भए म जान्थें, तर म वहाँ गएर टिभीमा मेरा मान्छेहरु मरेको हेर्न सक्दिनँ राज !" उनीहरुको बिमति बढेर गयो । "तिमी यहाँ कसको लागि बस्छ्यौ त ? तिम्रो को नै छ र ?""यो कस्तो प्रश्न सोधेको तिम्ले ? यो मेरो देश हो र म बाँचुन्जेल मेरो देशलाई मेरो खाँचो छ । अझ यो दुःखको घडिमा बढी । तिमी त अवसरको खोजीमा...", बोल्दा बोल्दै ऊ रोक्किई । बेस्सरी रोई ।"मलाई गलत नसम्झ राज । म तिमीले युद्धको कारण चट्ट नेपाल छोडेकोजस्तो छोडेर जान सक्दिनँ । म स्वार्थी बन्न सक्दिनँ राज । मलाई माफ गर", ऊ अझै सुँक्क-सुँक्क गर्दै थिई । "म तिमीलाई रोक्न सक्दिनँ र जाऊ पनि कसरी भनूँ ? कसरी भनँू ?""याद छ त्यो बिहान ? तिमीले मलाई मेरो नामको अर्थ सोधेको ? म मर्छु बरु तर म इमान्दार बच्चा नै भएर मर्छु ।" "कम ब्याक ज्याक्, कम ब्याक्" फिल्मको आखिरी दृश्यले राज झस्कियो । नोबुकोले इमेलमा गत वर्षको फुकोसिमाको सुनामीपछि भएका सबै कुराहरु इमेलमा लेखेकी थिई । ऊ आत्माग्लानिले उकुस्मुकुस भयो । राजले समिरलाई फोन गरेर अब सबै प्रोसेस बन्द गर्न भन्यो अनि नोबुकोलाई इमेल लेख्न बस्यो ।"पि्रय नोबुको, मलाई माफ गरिदेऊ । मलाई थाहा छ, तिमीले मलाई स्वार्थी किन भन्यौ, किनकि मेरो मन नदुखाई मलाई टाढा पठाउन सक्दिनथ्यौ । तिम्रो जिद्दीको अगाडि मलाई पनि मेरो आमाको याद आयो । अनि मेरो देशको..."लेख्दै मेट्दै, अनि फेरि लेख्दै मेट्दै निकै लामो इमेल लेख्यो उसले । अनि तल लेख्यो- "टाइटेनिकको दुई टुक्रा मध्येको एक ।" st.bulson@gmail.com Views : 501 | Last Updated : 2012-04-25 08:09:24 No comments so far